Blog of Nyein Chan Yar: How are you?
Posted by dathana at Monday, March 31, 2008
Thet Htoo@Myat Lone March 31, 2008 8:52 PM
အသံတိတ်အားပေးနေလို့ပါခင်ဗျ။ အမြဲတမ်း လာဖတ်ပါတယ် ကိုဒဿန။ ဆက်ပြီး ဘလော့နေမယ်ဆိုလို့လည်း ၀မ်းသာပါတယ်။
ဒါနဲ့။ ဟိုရှေ့က ဆူညံညံဆိုရင်တော့ ဘာသံလို့ မမေးနဲ့။ မီးစက်သံပဲခင်ဗျ။ လို့ ပြောရမယ်။ တကယ် စိတ်ညစ်စရာ ကောင်းပါတယ် အကိုရာ။
Anonymous April 10, 2008 9:21 AM
Anonymous April 10, 2008 12:18 PM
ဟုတ်တယ်နော်။ ဘယ်သူမှမေးဖော်မရရင်စိတ်မကောင်းဘူး။ :P အားပေးနေပါတယ်။ ဆက်ရေးပါ။
Anonymous April 10, 2008 12:45 PM
“သေပြီလား” မမေးလို့ အားငယ်မနေပါနဲ့ 
“ရန်ကုန်နွေ ငရဲလိုပဲ” ဆိုတာ အညာသား
ဒီနေ့ မှ သိလိုက်ရလို့ ခံစားရင်း အားပေးခဲ့ ပါတယ်....
Anonymous April 10, 2008 4:30 PM
မြောက်ဥက္ကလာအ၀ိုင်းမှာ ကားကြပ်နေလို့ နောက်ကျမှပဲ ရောက်ရတော့တယ်... ဆောရီး... ယပ်တောင်တွေတောင် ဝေလို့ ကုန်ပြီလား... ကိုယ့်ဖို့မှ မသိ..ဟား ဟား.. နောက်တာ... ကိုဒဿနကြီးကို အခုလို အရှင်လတ်လတ်ပြန်တွေ့ရတာ.. ၀မ်းသာပါတယ်.. ဆက်ပါ... ဘလော့ဂ်ပါ...ဂေါ်ဂယ်ကုမ္ပဏီ ဒေ၀ါလီ မခံမချင်း ဘလော့ဂါပါဗျာ...
Anonymous April 11, 2008 3:02 AM
i subscribed u in google reader some time ago and i do read ur entries. and apparently, it seems like i'm not the only one. =)
nitikiti April 14, 2008 10:10 AM
Anonymous May 06, 2008 6:37 AM
Anonymous August 31, 2008 9:20 PM
ခေတ်သစ်ညည်းချင်းဖွင့်နည်းလေးက ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲ အဲသလိုလေးညည်းချင်ပါတယ်။ ဖတ်မယ့်လူ နားထောင်မယ့်လူ ရှိရင်ပေါ့.. လာလည်သွားပါတယ် (လင်းအာရုဏ်။ http://linnaryone.blogspot.com)
Anonymous December 30, 2008 7:30 AM